.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: TTPod Music Player v 7.6.0
TTPod Music Player v 7.6.0
TTPod android Music Player လေးက online ပေါ်မှာသီချင်းရှာပြီးနားထောင်လို့ရသလိုdownload ပါလုပ်ယူနိူင်ပါတယ်။
နောက်ခံပုံနဲ့ theme design တွေလဲအစုံပါပဲ။သီချင်းကိုနားထောင်နေရင်းပိတ်သွားမယ့်အချိန်ရွေးနိူင်တဲ့ settingလဲပါပါတယ်။
သီချင်းနားထောင်ရင်းအိပ်ပျော်သွားတတ်တဲ့သူတွေအတွက် အဆင်ပြေမှာပါ။ အောက်မှာ Screenshot လေးတွေပါ။
Download >>> TTPod_v7.6.0__DeAPK.Com.apk
Posted by FlashSongCrazy at 10:50
Labels: Android App, Music